Nhau - Ndeapi eema 20 ezvivezwa emumaguta ari ekugadzira?
Ndeipi yemakumi maviri emadhorobha zvivezwa zvinogadzira?
Guta rega rega rine hunyanzvi hwaro hweveruzhinji, uye zvivezwa zvemumadhorobha muzvivakwa zvakazara, muhuswa husina chinhu nemapaki emigwagwa, zvinopa nzvimbo yemadhorobha chisviniro uye chiyero mukuzara kwevanhu. Unozviziva here izvozvo izvi 20 zvivezwa zvemuguta zvinogona kubatsira kana ukazviunganidza mune ramangwana.
Iyo zvivezwa of " Simba rezvakasikwa ”Mukati maguta makuru kutenderera pasirese akagadzirwa nemutambi weItaly Lorenzo Quinn. Quinn akafuridzirwa nekuparadzwa kwenzvimbo dzepasi mushure medutu, uye akagadzira yendarira, simbi isina simbi nealuminium zvivezwa mu " Simba rezvakasikwa " akateedzana . Iri ndiro "Simba reZvisikwa" muLondon.
French muimbi Bruno Catalano akagadzira Les Voyageurs (Les Voyageurs) muMarseilles, France. Icho chivezwa chinoviga chakakosha zvikamu zvemuviri wemunhu, uye zvinoita sekunge vachangopfuura nemumugwagwa wenguva, uye chikamu chisipo chinongomutsa vanhu Yeuka kuti mufambi wese zvinonzwisisika anosiya huru imba yekufungidzira kana abva pamba pake. Uye chikamu chisipo chechivezwa chinomiririra moyo usina hanya nevanhu vemazuva ano?
Icho chifananidzo cheKafka chakagadzirwa nemuvezi weCzech Jaroslav Róna chakakonzerwa nechinoitika mubhuku rekutanga raKafka "America" ​​(1927). Mune rally, mumiriri wezvematongerwo enyika anotasva pamafudzi egoridhe. Muna 2003 chivezwa chakapedzwa paDusny Street muPrague.
Mazhinji emabasa aLouise Bourgeois (1911-2010) anounza godo, hasha, kutya uye hunhu hwake hunorwadza mumaziso eruzhinji kuburikidza nemabasa. "Maman" (Spider) pamberi peGuggenheim Museum muBilbao, Spain. Iri dandemutande rakareba-tsoka makumi matatu rinomiririra amai vake. Anotenda amai vake vakangwara, vane moyo murefu uye vakachena sedandemutande.
Gedhi reMakore rakagadzirwa nemuBritish Artist Anish Kapoor chifananidzo chine matani zana negumi, chinowanzozivikanwa se pod, iri muChicago's Millennium Park. Rakafuridzirwa nemvura yemekiyuri, chivezwa chakareba mamita makumi matanhatu uye nemamita makumi matatu pakukwirira. Icho chakakurumbira chemaguta chivezwa muChicago.
Muna 2005, kumahombekombe ekumabvazuva kweDanube muBudapest, director director wefirimu Can Togay uye muvezi wemifananidzo Gyula Pauer akagadzira "Shoes neDanube" yekurangarira kuurayiwa kwemazana emazana evaHungary maJuda kubva 1944 kusvika 1945. Kusati kwauraya vanhu, maJuda vakaisa shangu mubhangi rerwizi, asi mushure mekupfura, mutumbi wakasimwa wakananga muDanube.
Mufananidzo waNelson Mandela unonyatso kuzivikanwa. Chivezwa padyo neHowick muSouth Africa chakagadzirwa nemuimbi weSouth Africa Marco Cianfanelli.
Chivezwa chekupfeka chakagadzirwa nemuvezi weSweden Klas Oldenburg iri padyo nePhiladelphia City Hall.
"Dhijitari Dougca" (Dhijitari Dougca) yakanaka kana inoshamisa, zvese zviri muVancouver yakatarisa chiteshi uye makomo eCypress Park. Ichi chivezwa chinoumbwa nesimbi simbi, kuputira aruminiyamu uye machena uye machena machubhu, ichiita nzvimbo yakanaka kune vashanyi nevagari kutora mifananidzo.
Bhaluni ruva (tsvuku) rakaiswa muNew World Trade Center muNew York City.
Chivezwa chendarira chemabhiza emusango muLas Vegas, chakagadzirwa naRobert Glenn, chinoratidza kutaridzika kwemabhiza mapfumbamwe emusango anomhanya mumvura.
Chivezwa chiri pamberi peNational Library muMelbourne, Australia, chinoreva kudonha kwebudiriro uye panguva imwechete zvinoreva kupfupika kwechokwadi.
"Knotted Gun" iri padyo neUnited Nations Headquarter kuNew York. Ichi chivezwa chinomiririra tariro yenyika isiri yechisimba.
Uku kuiswa kwesimbi musoro kuri muPrague uye nderimwe remabasa aDavid Sini. Musiyano uripo pakati peichi chivezwa ndechekuti unogona kutenderedza ese masimbi esimbi masendimita 360 degrees kuburikidza neInternet, uye kana akaenderana nguva nenguva, musoro muhombe unogona kugadzirwa. Basa racho kubatanidzwa kwenyanzvi yeanogadzira michina uye komputa tekinoroji nehunyanzvi.
Nderupi rudzi rwekufunga rwunofungidzirwa neiyi makumi maviri-tsoka-yakareba chifananidzo muPhiladelphia inoratidza muimbi? Bvisa zvipingamupinyi zvese, tinofanira…
Icho chivezwa chiri kunze kweCentre Pompidou Museum yeazvino Art. Yakagadzirwa nemuFrance muimbi Cesar Baldaccini, inoratidzira imwe yenyaya dzaanofarira, iyo yekufungidzira inomiririra vanhu, mhuka uye zvipembenene.
Yakagadzirwa nemumiriri weHungary Ervin Loránth Hervé, huswa hukuru hunosimudzwa uye zviumbwa zvikuru zvinoita kunge zvinokwira zvichibva pasi. Icho chivezwa chiri kunze kweBudapest Art Market.
Kurota kwaAlberta chifananidzo nemuSpanish muimbi Jaume Plensa. Basa iri rine chekuita nezvematongerwo enyika, uye vanhu vazhinji vanoita kunge vane maonero akasiyana pane zvarinoreva. Nekudaro, izvi ndizvo zvinoita kuti hunyanzvi hwaPlensa huve hwakakosha, nekuti inokurudzira kutaurirana kwakange kusipo kare.
Basa remuvezi weSingapore Chong Fah Cheong (zita reChinese: Zhang Huachang). Icho chivezwa chinoratidzira iyo nguva iro boka revakomana rakasvetukira muRwizi rweSingapore. Iri boka rezvivezwa riri kuCavenagh Bridge, kwete kure neFullerton Hotel.
"Spoon uye Cherries" muMinneapolis Sculpture Garden yakanaka uye inotamba dhizaini mubindu, uye zvakare zvine hunyanzvi zvinoratidzwa mumipendero miviri yevatema macheri machena. Muvezi akaipa basa rekumwaya mvura kuti achengete iyo cherry igare yakanaka.